(src)="3.3"> ဒီနေ့အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ်းကို အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၃၀၀ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆက်ပြီးတော့လည်း လက်မှတ်ထိုးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(trg)="2.2"> Kuanzia vita dhidi ya SOPA na PIPA huko Marekani hadi juhudi za kimataifa zilizomaliza Mkataba wa Kupinga Biashara ya Fedha Bandia ( ACTA ) , tumefikia nyakati za uwazi wa uhuru wa mtandaoni .
(src)="5.2"> အင်တာနက်ကို ဆက်လက်ပြီး လွတ်လပ်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ ၊
(trg)="3.2"> Mpaka sasa , Tamko hilo imetiwa sahihi na zaidi ya mashirika na kampuni 1300 na bado zoezi linaendelea kukua .
(src)="6.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ လွတ်လပ်ခွင့် များကို ကာကွယ်ရန်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပါမည်၊
(trg)="3.4"> Unaweza kutia saini kuunga mkono tamko hilo hapa ; waweza pia kuiona kupitia mashirika mengineyo , ikiwa ni pamoja na EFF , Free Press , Shirika la Access na pia Cheezburger .
(src)="6.2"> ၄င်း တို့သည်တိုက်ခိုက်ဆောင်ယူရန်ထိုက်တန်သည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
(trg)="3.7"> Kwa kuufanya mtandao kuwa huru na wazi , tunatoa wito kwa jumuiya , viwanda na nchi kutambua na kuheshimu kanuni hizi .
(src)="7.2"> ၄င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူကြ ၊
(trg)="6.1"> Ungana nasi kuufanya Mtandao wa intaneti kuwa huru na wazi .
(src)="7.3"> သို့မဟုတ်သဘောမတူကြပါနှင့် ၊
(trg)="6.3"> Tunasimama imara kudai mtandao huru na wazi .
(src)="7.4"> ငြင်းခုန်ပြောဆိုကြပါ ၊
(trg)="8.1"> Kauli : Kuto dhibiti mtandao .
(src)="8.1"> အင်တာနက်ကို လွတ်လပ်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာစွာ ဆက်လက်တည်ရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ ။
(trg)="10.1"> Uwazi : Kuufanya mtandao wa intaneti kuwa wazi ambapo kila mtu ana uhuru wa kuunganishwa , kuwasiliana , kuandika , kusoma , kutazama , kuzungumza , kusikiliza , kujifunza , kuunda na kubuni .
(src)="14.1"> ပွင့် လင်းမြင်သာမှု ၊
(trg)="11.1"> Ugunduzi : Kulinda uhuru wa kugundua na kuunda bila kulazimika kuomba idhini .
(src)="14.2"> အင်တာနက်ကို လူတိုင်းက လွတ်လပ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်၊
(trg)="11.2"> Msizuie teknolijia mpya , na msiwaadhibu wagunduzi kwa vitendo vinavyofanywa na watumiaji wa teknolojia zao .
(src)="1.1"> မော်​ ရို ​ ကို ၊
(trg)="1.1"> Morocco : Wanafunzi Wadai Marekebisho kwenye Mfumo wa Elimu
(src)="3.1"> ထိုလှုပ်ရှားမှုအဟုန်ကို အစိုးရတက္ကသိုလ်များတွင်ကျောင်းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင်းကျပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟူသော သတင်းက အားဖြည့် ပေးလိုက်ပုံရသည်။
(trg)="3.1"> Yaonekana jambo zima lilipata kasi zaidi kufuatia taarifa kwamba serikali ilikuwa na mipango ya kushupaza sera ya masomo katika vyuo vikuu vya umma .
(src)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
(trg)="5.1"> Wito huo ulisambazwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii .
(src)="7.2"> ဗီဒီယိုများအရ ရာချီသောကျောင်းသားများနှင့် ၄င်းတို့၏ မိဘများက တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
(trg)="6.2"> " Mfumo mzima wa elimu unahitaji kubadilishwa , " mwanafunzi mmoja anasema mbele ya kamera .
(src)="9.2"> ဟာဆန်အောဇန်နီ ၏ ဓာတ်ပုံ ၊
(trg)="13.2"> Kundi hili liliahidi kuandaa migomo ya chini kwa chini na mikutano zaidi nchini kote .
(src)="13.3"> သူတို့တွေက မော်ရိုကိုကျောင်းသားတွေ ၊
(trg)="14.1"> Kwenye Tumblr , UECSE iliandika :
(src)="1.1"> ပါ ​ ကစ္စ ​ တန်၊
(trg)="1.1"> Pakistani : Msichana wa Kikristo wa Miaka 11 Awekwa Kizuizini kwa Kukashifu Dini .
(src)="3.1"> ဘုရားသခင်ကို စော်ကားမှုသည်ပါကစ္စတန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၉၅ ( ခ ) အရ သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်သူသည်ထောင်ဒဏ်တစ်သက်၊
(trg)="2.1"> Rimsha anatuhumiwa kwa kuchoma karatasi za Noorani Qaida , ambayo ni mjumuisho wa masomo ya kujifunzia kiarabu kwa wanaoanza kujifunza na kasha kuziweka ndani ya mfuko wa plastiki .
(src)="3.3"> ဤသတင်းကို ဩဂုတ်လ ( ၁၈ ) ရက်နေ့က ပါကစ္စတန်ရှိ ခရစ်ယာန်များဟူသော ဝက်( ဘ်) စာမျက်နှာတွင်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="3.1"> Kosa la kukashifu imani linaelezwa katika kifungu cha sheria namba 295 cha hukumu za Pakistani ambapo mshitakiwa akikutwa na hatia anaweza kufungwa kifungo cha maisha ama hukumu ya kifo .
(src)="4.5"> ထိုသူသည်လည်း ဘုရားသခင်ကို စော်ကားမှုဖြင့် စွပ်စွဲခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="3.2"> Habari hizi zilisambazwa na mtandao wa ‘ Wakristo wa Pakistani’ mnamo Agosti 18.
(src)="5.2"> ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များသည်ကြော်က်ရွံ့ပြီး ပုန်းအောင်းနေကြသည်၊
(trg)="4.1"> Habari hii ilipata umaarufu katika vyombo maarufu vya Pakistani siku tano baadae , yaani Agosti 22.
(src)="5.3"> ၂၀ ⁠ ၀၉ခုနှစ်ဂွတ်( ဂျ်) ရာ တိုက်ခိုက်မှုက ၄င်းတို့စိတ်တွင်ပုံရိပ်ထင်နေဆဲဖြစ်သည်။
(trg)="4.2"> Kabla ya msichana huyu kuwekwa kizuizini , baadhi ya wakazi wa mtaa anaoishi msichana huyu walizuia barabara kuu ya jiji .
(src)="5.4"> ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင်မူဆလင်တစ်ဦးသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ အိမ်များကို မီးရှို့ခဲ့ပြီး ရဲများက လာရောက်ကယ်တင်ခြင်း မပြုခဲ့ကြပေ ။
(trg)="4.3"> Kundi hili lilitaka the sheria mkononi . mwezi uliopita kundi hili lilimchoma moto mtu aliyekuwa na matatizo ya akili katika mtaa wa Bahwalpur ; ambapo mtu huyu alituhumiwa pia kwa kukashifu imani .
(src)="5.6"> ဂွတ်( ဂျ်) ရာတိုက်ခိုက်မှုသည်ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်သူများပင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း သိရသည်။
(trg)="5.2"> Wakristo wanaogopa kiasi cha kujificha ; kumbukumbu ya mashambulizi ya Gojra ya mwaka 2009 bado wanayakumbuka pale ambapo kundi la Waislamu lilipochoma moto nyumba za wakristo na bila ya Polisi kutoa msaada wowote .
(src)="6.1"> ယူအေအီးနိုင်ငံတွင်အခြေချနေထိုင်သူ ပါကစ္စတန်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အန်ထော်နီ ပါမယ်( လ်) က ထိုဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ တွစ်တာအသုံးပြုသူတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရယူခဲ့သည်။
(trg)="6.2">‏ @anthonypermal : @anthonypermal : imethibitika- polisi wa Pakistani wamemtia nguvuni msichana wa kikristo wa miaka 11 kwa tuhuma za kukashifu dini .
(src)="6.9"> ကောင်မလေးကို သူတို့က သတ်ပစ်ကြမှာ ။
(trg)="6.5"> Kuwa na mfumo wa serikali usio wa kidini ndilo suluhisho la pekee .
(src)="6.14"> စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ပါကစ္စတန်လူမျိုးတွေက ဒီလှုပ်ရှားတောင်းဆိုစာကို လက်မှတ်ထိုးပေးနေကြတာပါ ၊
(trg)="6.6"> Kwa hakika watamuua : http:/ /www.change.org/ petitions/ high-commissions-and-diplomats-of-secular-western-nations-asylum-to-the-family-of-11-year-old-christian-girl-accused-of-blasphemy# …
(src)="7.3"> အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ ပါကစ္စတန်သံအမတ်က တွစ်တာစာတိုပို့ခဲ့သည်မှာ ၊
(trg)="8.1"> Wakati huohuo , raisi wa Pakistani Asif Ali Zardari aliwataka maofisa wamuwekee bayana hali halisi .
(src)="7.4"> @ sherryrehman ၊
(trg)="8.2"> Balozi wa Pakistani nchini Marekani anatwiti :
(src)="7.6"> အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့က ဘုရားသခင်စော်ကားမှုဥပဒေအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ပါကစ္စတန်အား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
(trg)="8.3">‏ @sherryrehman : Raisi Zardari ameziwekea msisitizo mkubwa taarifa kuhusiana na kuwekwa kizuizini kwa msichana huyu wa kikristo anayetuhumiwa kukashifu dini na pia ameomba kupewa taarifa hizo. .
(src)="7.7"> @ amnesty ( အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့) ၊
(trg)="8.4"> Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeitaka Pakistani kuzifanyia mabadiliko sheria zinazohusiana na kukashifu imani :
(src)="7.13"> လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် မေတ္တာ " ဟူသော စာအုပ်ကိုရေးသားသူ မူဆလင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် အိရှတ်( ဒ်) မန်ဂျီက ပါကစ္စတန်ဘုရားသခင်စော်ကားမှုဥပဒေအား အပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်သည်။
(trg)="8.5">‏ @amnesty ( Amnesty International ) : Pakistani haina budi kuhakikisha kuwa msichana huyu wa kikristo aliyewekwa kizuizini baada ya kukashifu imani anakuwa salama kwani maisha yake yapo hatarinihttp:/ /owl.li/ d9aPc
(src)="7.25"> ဒါလည်း " ဘုရားသခင်စော်ကားမှု " ပဲလား
(trg)="8.6"> Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa ameitakata mamlaka ya Pakistani kumuachia huru msichana huyu .
(src)="7.31"> လက်ရှိအာဏာရ ပါကစ္စတန်ပြည့် သူပါတီနှင့် ပါကစ္စတန်တီဟရိ ( ခ်) အင်ဆန်( ဖ်) ( PTI ) တို့ကလည်း ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
(trg)="8.7"> Irshad Manji , mwanamke wa kiislamu aliye mtetezi wa wanawake na mwandishi wa ‘ Mungu , Uhuru wa kuishi na Upendo’ (‘ Allah , Liberty and Love’ ) ameonesha kutokuikubali sheria ya Pakistani inayohusiana na masuala ya kukashifu imani .
(src)="7.32"> PTIခေငါး်ဆောင်အီမရန်ခန်းက တွစ်တာစာတိုပို့ခဲ့သည်မှာ ၊
(src)="7.33"> @ ImranKhanPTI ၊
(trg)="9.2"> Katika mtandao wa Twita , jambo hili limeonekana kulalamikiwa na watetezi wa haki za binadamu wa Pakistani , wanaharakati pamoja na wanasiasa wachache .
(src)="7.45"> ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်စော်ကားမှု ဥပဒေကို မပြင်နိုင်ပါဘူး ။
(trg)="9.4">“ Alikuwa na maika 11 tu . "
(src)="7.46"> က ၊
(trg)="9.8"> Kiongozi wa PTI , Imran Khan alitwiti :
(src)="7.48"> ခ ၊
(trg)="9.9"> @ImranKhanPTI : Ni aibu !
(src)="8.3"> တိုက်ဆိုင်စွာပင်၊
(trg)="9.13"> Jambo hili linapewa msisitizo mkubwa .
(src)="9.2"> ၄င်းတို့က ပါကစ္စတန်နို်ငငံ ၊
(trg)="9.14"> Hata hivyo , hakuna mtu yeyote kutoka Pakistani anayetaka sheria hii ibatilishwe .
(src)="9.4"> ဓာတ်ပုံ - ရဂျ်ပူ ရာဆီအာ ။
(trg)="9.15"> @anthonypermal : : hatuwezi kuikwepa sheria hii inayohusiana na kukashifu imani za wengine .
(src)="9.5"> မူပိုင်ခွင့် - ဒီမိုတစ်( ခ်) ( စ်) ( ၀၉ ၊
(trg)="9.17"> Pili , maafisa wa polisi hawawezi kuzuia mauaji ya wazi kabisa ya washia , inawezekanaje hali hii ?
(src)="10.5"> မယ်ဒီ ဟာဆန်က သူ့ဘလော့( ဂ်) တွင်ရေးထားသည်မှာ
(trg)="9.21"> Baadae , Sherry Rehman alipokea vitisho vya kuuawa na hivyo kulazimika kukaa ndani ya nyumba yake bila ya kutoka .
(src)="10.10"> စိတ်မလုံခြုံမှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေတာလဲ ။
(trg)="11.2"> Picha na Rajput Yasir .
(src)="10.11"> သူတို့ဘုရားသခင်က သိပ်ပြီးအားနည်၊
(trg)="12.4"> Mehdi Hasan katika blogu yake anaandika kuwa :
(src)="1.1"> ၂ ​ ၀ ​ ၁ ​ ၂ ပါ ​ ရာ ​ လံ ​ ပစ်၊
(trg)="1.1"> Paralympiki 2012 : Mwanzo mzuri , Habari za Kukumbukwa
(src)="1.3"> ချီး ​ ကျူး ​ ဖွယ်ဇာတ်​ လမ်း
(trg)="1.2"> Makala hii ni sehemu ya makala zetu maalum kuhusiana na michezo ya Olympiki ya London , 2012 .
(src)="5.1"> ဂျေအိုအယ်( လ်) ပရက်( စ်) မှ ချား ( လ်) ( စ်) အယ်( လ်) မယ်လီယာနီက ထိုကစားပွဲများအတွက်စံချိန်တင်လက်မှတ်ရောင်းရနှုန်းအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။
(trg)="3.1"> Kuanzia tarehe 29 , Augusti hadi Septemba 12 , 2012 , wanamichezo 4,200 kutoka nchi 166 watashiriki katika michezo ya 14 ya Paralympiki jijini London itakayohusisha nyanja ishirini za kimichezo .
(src)="1.4"> လီဗာပူး ( လ်) မှ ဟူလျာက ပြောသည်မှာ ၊
(trg)="1.4"> Hulya , kutoka Liverpool , anasema :
(src)="1.5"> @ hulyaulas : သမိုင်းမှာ အကြီးဆုံး ကွာဒစ်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများရဲ့အစာငတ်ခံ သပိတ်မှောက်မှုကို ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေက ဂရုမစိုက်တာခံနေရပါတယ ်
(trg)="1.5"> @hulyaulas : Mgomo mkubwa wa kisiasa wa kutokula katika historia kwa wafungwa wa Kikurdi unapuuzwa na haupewi nafasi yoyote katika vyombo vikuu vya habari .
(src)="1.9"> အယ်( လ်) ဂျာဇီးယား ၏ The Stream သတင်းစဉ်သည်အစာငတ်ခံ သပိတ်မှောက်မှု ၏ အတိမ်အနက်ကို သိသာထင်ရှားစေသည့် နိုင်ငံတကာထံ အသိပေးခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသော အဓိကမီဒီယာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
(trg)="1.7"> @dirman95 : Ni vigumu kula ukijua kwamba mgomo wa kutokula umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya siku 51 na dunia haifanyi lolote kuhusu hilo ... inakera .
(src)="1.10"> ၄င်းတို့က လူမှုမီဒီယာ တံခါးပေါက်များကို အသုံးပြုကာ အာရုံစိုက်မှုအား မြှင့် တင်ခဲ့သည်။
(trg)="1.14"> Serikali ya Kituruki lazima kuingia katika mazungumzo makubwa na wafungwa hawa ambao sasa wanahatarisha maisha yao ya kufichua dhuluma wanayofanyiwa .
(src)="1.12"> @ ajstream ဘာဖြစ်လို့တူကီမှာ ရှိတဲ့အစိုးရနဲ့မီဒီယာတွေက ကွာဒစ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း ၇၁၅ဦးရဲ့အစာငတ်ခံ သပိတ်မှောက်မှုတွေကို လျစ်လျူရူခဲ့တာပါလဲ
(trg)="3.2"> Maelfu ya wafungwa wa kisiasa Kikurdi wamekuwa katika mgomo wa kutokula nchini Uturuki tangu Septemba 12 na jumuiya ya kimataifa bado iko kimya .
(src)="5.2"> ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကွာဒစ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက လွန်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ ၁၂ရက်ကတည်းက အစာငတ်ခံ သပိတ်မှောက်နေခဲ့ကြပေမဲ့လည်း နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ငြိမ်သက်မြဲ ငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ဒါဟာ လွတ်လပ်မှုအပေါ်ကာ ( ဒ်) ရဲ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်တာပါပဲ ၊
(trg)="3.5"> Hannelore Kuchlersaid alilizungumzia hili vizuri " Kurdistan ni nchi ambayo imechukuliwa mateka . " na wakati vyombo vya habari vya kimataifa vyataka kukufanya ufikiri hatua hii ni kwa sababu ya Abdullah Ocalan na PKK , ukweli si huo .
(src)="1.1"> မလေးရှား နိုင်ငံရေးသမားများ ပြောသည့် လန့် စရာစကား ( ၈ ) ခွန်း
(trg)="1.1"> Nukuu 8 za Kushangaza Zilizopata Kutolewa na Wanasiasa wa Malaysia
(src)="4.1"> ဘာလစ်( ခ်) စိနဆိုသည့် မလေးဘာသာစကားအား တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လျှင်" တရုတ်ပြည်သို့ပြန်သွား " ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
(trg)="1.2"> Balik Cina ni tovuti mpya ambayo hukusanya baadhi ya nukuu za kuchekesha na za ajabu zinazotolewa na wanasiasa wa Kimalysia .
(src)="4.3"> ထိုအသုံးအနှုန်းနှင့် အခြားဆင်တူသည့် သဘောရှိသည့် အသုံးအနှုန်းများသည်ထိုစဉ်ကတည်းက မလေးရှားတွင်ရေပန်းစားလာခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="4.2"> Neno Balik Cina lilikuzwa na mkuu wa shule ya sekondari ya Shah Alam mwezi Julai 2013.
(src)="4.5"> comကို ကျွန်ုပ်တို့စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="4.3"> Neno hilo na yanayofanana nayo yamekuwa yakitawala mijadala ya mtandaoni nchini Malaysia .
(src)="4.10"> အဲလိုတွေဖြစ်လွန်းတော့ကျွန်တော်တို့ရယ်ခဲ့ရတာတွေရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုတောင်ကောင်းကောင်း မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူး ။
(trg)="4.6"> Aizyl Azlee wa mtandao wa The New Forward anapitia tovuti hiyo na kuthibitisha kuwa wanasiasa wa Malysia mara nyingine hutoa kauli za kijinga :
(src)="4.11"> အောက်တွင်ဖော်ပြထားတာတွေဟာ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များတွင်မလေးရှားနိုင်ငံရေးသမားများ ပြောဆိုခဲ့သည့် မှတ်သားဖွယ်ရာ နှင့် ထိတ်လန့် ဖွယ်ရာ အသံများအနက်ရှစ်ခွန်းဖြစ်သည်။
(trg)="4.10"> Hapa chini unaweza kusoma mifano minane ya baadhi ya nukuu za kukumbukwa na kwa hakika za kushangaza zilizowahi kutolewa na wanasiasa wa Malysia katika miaka ya hivi karibuni :
(src)="5.1"> ၁ ။
(src)="7.1"> ၂ ။
(src)="7.3"> သို့သော ၄င်း ၏ အတွေးထဲတွင်တွစ်တာဌာနချုပ်သို့ရောက်နေခဲ့သည်ဟု ထင်ခဲ့ပုံရသည်။
(trg)="7.2"> Waziri Mkuu Najib Razak , mtumiaji mkubwa na maarufu wa mitandao ya kijamii nchini Malaysia , ameweka picha inayomwonyesha akiwa na mwanzilishi wa Facebook Mark Zuckerberg .
(src)="9.1"> ၃ ။
(src)="11.1"> ၄ ။
(src)="12.1"> သတင်းစာတွေ အရမ်းများရင်မလေးရှားနိုင်ငံသား ခေါင်းရှုပ်ကုန်မှာပေါ့။
(trg)="11.2"> Mwezi uliopita , tovuti huru ya mtandaoni ilinyimwa ruhusa ya kuchapisha kwa sababu ya mantiki ifuatayo :
(src)="13.1"> ၅ ။
(src)="13.3"> သူသာ ပြန်အပြစ်တင်ခံခဲ့ရသည်။
(trg)="13.2"> Kiongozi wa Upinzani Anwar Ibrahim huenda alidhani angeweza kutumia janga la ndege ya MH370 kuendelea kushusha hadhi ya serikali .
(src)="14.1"> MH 370 နှင့် ပတ်သက်၍ ၊
(trg)="13.3"> Serikali imejibu mapigo .
(src)="15.1"> ၆ ။
(src)="16.2"> ဒါမှ တရုတ်တွေ ဒေါသမထွက်တော့မှာ ။
(trg)="15.3"> Alishutumu kutokudhibitiwa kwa habari kama chanzo cha hasira ya ndugu hao .
(src)="17.1"> ၇ ။
(src)="19.1"> ၈ ။
(src)="2.2"> ၄င်းသည်ယခုအခါ မိုက်​ ခ ​ ရို ​ ဆော့( ဖ်) အသိ ​ အမှတ်ပြု ​ လက်မှတ်​ ရ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိုက်​ ခ ​ ရို ​ ဆော့( ဖ်) အသိ ​ အမှတ်ပြု ​ နည်းပညာကျွမ်းကျင်( အမ်တီအေ ) လက်မှတ်များကိုလည်း ဆော့( ဖ်) ဝဲ အခြေခံ ၊
(trg)="1.2"> Kijana mwenye asili ya Zambia , lakini anayeishi Uingereza mwenye miaka 15 Samkeliso Kimbinyi anatengeneza zana za kupiga soga mtandaoni kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano na hivyo kuwa mmoja wa wataalam wadogo zaidi waliobobea na wanaotumiwa na kampuni ya Microsoft barani Ulaya .
(src)="4.2"> ၄င်း ​ ၏ တွစ်​ တာ ​ မှ ယူထားသည ်
(trg)="4.1"> Picha ya Sam Kimbinyi imechukuliwa kwenye wasifu wake wa Twita .
(src)="5.1"> ကမ္ဘာ့အသံက ဆမ်နှင့် အီးမေး ( လ်) မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ၄င်း ၏ အောင်မြင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်မှာ ၊
(trg)="6.1"> Mwezi Machi mwaka huu , nilikuwa na fursa ya kukutana na wafanyakazi wa Ofisi ya Microsoft pale Seattle , ambao walikuwa Uingereza kwa siku moja kama sehemu ya ziara yao ya Ulaya wakizungumza na wateja wao wanaopata mafunzo kwenye Chuo chao cha Taknolojia na Mawasiliano cha Microsoft .
(src)="6.1"> ဒီနှစ်မတ်လတုန်းက ဆီရီတယ်( လ်) က မိုက်​ ခ ​ ရို ​ ဆော့( ဖ်) ရုံးကလူတွေနဲ့တွေ့ခွင့် ရခဲ့တယ်။
(trg)="6.2"> Walikuwa ni wale wa timu ya Mafunzo -Mkurugenzi Mwandamizi Tim Sneath , Mkurugenzi wa Program za Mafunzo Keith Loeber na Mkurugenzi wa Maudhui Briana Roberts .
(src)="6.3"> သူတို့တွေက သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံအဖွဲ့က အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ တင်( မ်) စနိ ( သ်) ၊
(trg)="7.1"> Mnamo Mwezi Mei 26th 2014 nilichapisha toleo la kwanza la zana ya App—Lite—on ya simu zenye mfumo wa Windows.
(src)="6.4"> တက္ကသိုလ်အစီအစဉ်တွေရဲ့ဒါရိုက်တာ ကိ ( သ်) လိုဘာနဲ့အကြောင်းအရာဒါရိုက်တာ ဘရီအာနာ ရောဘတ်( စ်) တို့တွေပါ ။
(trg)="7.4"> Siku nane baadae na baada ya kukosolewa sana na Jumuiya ya Reddit ya Simu za mfumo wa Wondows , nilipata habari njema za mipakuo ipatayo 300 na wengine waliipa alama za juu kwamba inafaa .
(src)="7.8"> အမ်တီအေလေ့ကျင့် ခန်းတွေကကျွန်တော်တို့အတန်းထဲမှာ သင်နေရတာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်၊
(trg)="7.5"> Baada ya muda , ikawa kwenye kundi la " Mpya na Inapata Umaarufu " kwenye sehemu ya mauzo ya bidhaa mtandaoni .
(src)="7.9"> ဒါပေမဲ့ပရိုဂရမ်ရေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လုပ်ပေးတယ်၊
(trg)="7.6"> Mbeleni ninatarajia kutoa zana tumizi zaidi na kuendelea kujifunza zaidi fani ya Sayansi ya Kompyuta chuoni .
(src)="7.12"> အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်ငယ်တစ်ခုကို ရေးနိုင်ခဲ့တယ်။
(trg)="7.11"> Hongera sana kwa Samkeliso Kimbinyi , miaka 15 , mwanafunzi wa kwanza kupata sifa za kituo cha mafunzo cha Microsoft katika utengenezaji wa zana
(src)="3.2"> သူတို့ပျောက်ကွယ်ခြင်းမှ ကယ်တင်ရန်အလို့ငှါ ကျိုးပမ်းရာတွင်ဘာသာစကား ပြောဆိုသူများ ၊
(trg)="1.2"> Kamusi mpya ya Kijapani na Kiingereza iitwayo Kenkyusha picha na Niko Kitsakis ( CC-SA-3.0 )
(src)="5.2"> ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းကိုပဲ အတူတူပြောလျှင်မလွယ်ကူပေဘူးလားဟု အချို့ပညာရှင်များကတော့ငြင်းချင်ငြင်းကြဦးမည်။
(trg)="2.1"> Makala haya yameandikwa na mwandishi mwalikwa Allyson Eamer , mwanazuoni katika kitivo cha stadi za jamii na lugha katika Taasisi ya Teknolojia ya Chuo Kikuu cha Ontario .
(src)="6.6"> သမိုင်း ၊
(trg)="2.2"> Toleo la makala haya lilichapishwa awali kwenye blogu ya Mradi wa Ethnos .
(src)="8.1"> နည်းပညာသည်အချိန်နှင့် နေရာကို အမှုမထားပဲ သင်ယူသူများကို ဘာသာစကားဆရာများနှင့် အကြောင်းအရာများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။
(trg)="4.1"> Lugha zimekuwa katika hatari ya kupotea kadri muda unavyokwenda na kadri wazungumzaji wake wanavyohamia kwenye lugha nyinginezo zinazoonekana kuwa na nguvu ya kisiasa na kiuchumi .
(src)="8.2"> ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဘာသာစကားများ ၏ စကားသံကို အသံသွင်းခြင်းအားဖြင့် နည်းပညာသည်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
(trg)="8.1"> Teknolojia inaweza kuwaunganisha walimu na maudhui ya lugha na watu wanaotamani kujifunza lugha hizo duniani kote kwa wakati ule ule .
(src)="8.7"> နည်းပညာသည်ဆရာများ နှင့် သင်ယူသူများကို ဘာသာစကားသင်ယူရာတွင်တစ်လမ်းသွား သို့မဟုတ်တွဲဖက်ပုံစံမျိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။
(trg)="9.1"> Watu wenye fikra za kuleta mabadiliko wanaunganisha nguvu za kiteknolojia kuzileta lugha kutoka kwenye hatari ya kupotea , na katika hali nadra sana , kuzifufua lugha zilikwisha kufa .
(src)="11.2"> ဂါးလက်( Gaelic ) ဘလော့ဂါများ သည်အိုင်ယာလန်ဘာသာစကား ၏ အသုံးပြုမှုအပေါ်အကြံပေးချက်များ ဝေမျှနေ ကြသည်။
(trg)="11.1"> Ulaya Lugha ya Norwey Kaskazini Sàmi imewekwa kwenye mfumo rahisi wa kamusi ya kupakuliwa mtandaoni .
(src)="13.2"> ရှေးဟောင်း ပုံပြင်များကို မာလီ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများနှင့် အသံသွင်း သိမ်းစည်းနေကြသည်။
(trg)="13.3"> Kampuni ya kujifunza lugha mtandaoni inatoa kozi ya lugha za miluzi kwenye visiwa vya Canary nchini Uhispania .
(src)="14.2"> အယ်လ်ဆာဗေးဒေါနိုင်ငံ ၏ ပီပေး ( Pipil ) ဘာသာစကားအတွက်စကားပြော အဘိဓါန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
(trg)="16.1"> Asia Zana ya kidijitali ya kusimulia habari sasa inajumuisha lugha za makabila madogo nchini China .
(src)="14.3"> ပါရာဂွေးနိုင်ငံ ၌ လည်း အချေး ( Aché ) ဘာသာစကားတွင်လူကိုယ်တိုင်ပြော ဇာတ်လမ်းများကို အသံသွင်းခြင်း ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။
(trg)="19.1"> Nchi za Bahari ya Pasifiki Lugha ya ishara kwa wenyeji wa Australia ya Kati sasa inaweza kujifunzwa kupitia video za mtandaoni .
(src)="15.1"> အာရှ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသုံး ဇာတ်လမ်းပြော ဆော့ဖ်ဝဲတွင်တရုတ်လူနည်းစု ဘာသာစကားအချို့လည်း ယခုပါဝင်လာပြီ ဖြစ်သည်။
(trg)="20.1"> Kwa habari za karibuni zaidi kuhusu teknolojia kuhusu matumizi ya elimu ya lugha za asili , angalia kwenye tovuti ya hifadhi ya maudhui ya Allyson Eamer